पीएसंगको झगडाले प्रदेश प्रमुखको बर्खास्ती - Netizen Nepal
पीएसंगको झगडाले प्रदेश प्रमुखको बर्खास्ती
in घटना, नेटिजन मंच, राजनीति, वर्गीकृत, समसामयिक, हाम्रो नेपाल
काठमाडौं,८ फागुन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुख एक मात्र दलित र कम्युनिस्ट आन्दोलनका अथक यात्री तिलक परियारलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा ८ फागुनमा पदमुक्त गर्नुभएको छ ।
संविधानमा प्रदेश प्रमुखको पदावधि समाप्त भएमा वा सो अगावै राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा पद रिक्त हुने व्यवस्था छ । यद्यपि परियारलाई हठात् पदमुक्त गर्नुको कारण भने खुलाइएको छैन ।परियारको सचिवालयले भने राजनीतिक प्रतिशोधका कारण हटाइएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । प्रमुख स्वकीय सचिव पदमबहादुर बिकले परियारको बर्खास्तीलाई संघीयतालाई कमजोर बनाउने प्रारम्भिक संकेतका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताएका छन् ।
‘तपाईलाई पनि थाहा छँदैछ, कतिलाई संघीयता मन परेको थिएन, त्यसैले कमजोर ठाउँमा प्रहार गरौँ न त भन्ने लागेको होला । अर्को कुरा यसलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको शृंखलाकै रूपमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।’
उनले अहिलेको घटनाक्रमलाई राजनीतिक परिस्थितिको उपजका रूपमा समेत हेर्नुपर्ने बताए । ‘उहाँले अत्यन्तै सन्तुलनकारी भूमिका निभाउनुभएको थियो, कुनै गुट वा उपगुटमा नलागी आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुभएको थियो । सायद अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति हेरेर हटाइयो होला,’ उनले भने ।
परियार २०७६ कात्तिकमा प्रदेश प्रमुख नियुक्त हुनुभएको थियो । त्यतिबेला प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिमा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीबीच भागबण्डा गरिएको थियो । परियार तत्कालीन माओवादीका नेता हुन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओली निकट दुई मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको नेकपा (प्रचण्ड–नेपाल) लाई ‘देखाइदिन’ परियारलाई हटाइएको अड्कल लगाइएको छ ।
केही दिनअघि नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराई र परियारका स्वकीय सचिव अनिल पासवानबीच भएको झगडापश्चात् परियारलाई निशाना बनाइएको कतिपयको अनुमान छ । बिकले भने त्यहि विवादलाई आधार बनाएर हटाइएको भए त्योभन्दा कमजोर मानसिकता के होला ? भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
‘राजनीतिक छलफलका क्रममा भएका त्यस्ता कुराकानीलाई आधार मानेर प्रदेश प्रमुखलाई जोड्न मिल्छ ? यदि त्यहि कारण हो भने त्योभन्दा विडम्बना अरु केही हुनै सक्दैन’ उनले भने ।
राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा परियारलाई हटाएपछि रौतहटका राजेश अहिराज झालाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरिएको जनाइएको छ । जनआस्थाबाट